महालक्ष्मीलाई खुशी पार्न चामल र घिउँको अपनाउनुहोस् यो सरल तरिका !! | सुदुरपश्चिम खबर
महालक्ष्मीलाई खुशी पार्न चामल र घिउँको अपनाउनुहोस् यो सरल तरिका !!
यस संसारमा हरेक कोही व्यक्ति आफ्नो घरको सुख शान्ति बनाइराख्नको लागी कयौँ तरहको उपाय अपनाउने गर्दछन् । आफ्नो घरको शान्तिका लागी हरेक सम्भव कोशीश गर्ने गर्दछन् । जसले उनीहरुको घरपरिवारमा कुनै पनि प्रकारको समस्याँ उत्पन्न नहोस् । घरपरिवारका सबै सदस्य आफ्नो जीवन खुशी र तनावमुक्त व्यतित गर्न सक्दछन् । उनीहरु आफ्नो इष्टदेवसँग पनि सुख समृद्धिको लागी प्रार्थना गर्दछन् । तर यो सबै गर्दा पनि यस्तो देखिने गरिन्छ कि व्यक्ति समस्या नै समस्याले घेरिएको हुन्छ । उसलाई आफ्नो समस्याबाट छुटकारा मिल्दैन ।र घर परिवारमा पनि नकरात्मक उर्जा पैदा हुन्छ ।
यदि तपाईलाई पनि यस्तो भएको छ भने आज हामी तपाईलाई यस लेखको माध्यमबाट यस्ता सरल उपाय बताउन गइरहेका छौँ । जसको उपायले तपाइर्ले आफ्नो जीवनमा खुशीयाली ल्याउन सक्नुहुन्छ । र तपाइर्को घरपरिवारमा सुख समृद्धिको आगमन हुनेछ । यो उपाय गर्नाले तपाईमाथि माता लक्ष्मीको कृपा बर्सिनेछ । र धनसँग सम्बन्धित समस्याहरु पनि खतम हुनेछ । यो उपाय धेरै नै सजिलो छ । तपाई यसलाई सजिलै तरिकाले अपनाउन सक्नुहुन्छ र तपाई आफ्नो समस्याबाट छुटकारा पाउनसक्नुहुन्छ ।
आउनुहोस् घरमा सुख र शान्तिको लागि यो उपाय थाहा पाउनुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो जीवनमा पैसाको समस्याहरू पार गर्न चाहानुहुन्छ भने, यसका लागि, जो तपाईंको घरको जेठो मान्छे हो, उसले बिहिबार पहेलो वस्त्र लगाउनुपर्दछ । त्यसपछि परिवारका सबै सदस्यले उक्त व्यक्तिलाई केही चामल र थोरै घिउँ दिनुपर्ने हुन्छ । तपाईले पार्नुभएको जम्मा चामल र घीउँलाई तपाईंको घरको मन्दिरमा राख्नुहोस्, यदि तपाईंले यो उपाय गर्नुभयो भने यसले तपाईंको पैसाको समस्या हटाउनेछ।
यदि तपाई वास्तु दोष तपाईको घरबाट हटाउन चाहानुहुन्छ भने यसको लागि तपाईले बेसारमा सिन्दुर र थोरै घिउँ मिसाउनुहोस् र ५ पटक यसको टिका लगाउनुहोस्, यो उपाय एकदम प्रभावकारी छ । यसबाट वास्तु दोषबाट छुटकारा पाउनेछ।यदि तपाईं दैनिक नुहाउनुहुन्छ भने तपाईं आफ्नो घरको मुख्य प्रवेशद्वारमा तामाको भाँडोमा राखिएको पानी छर्कियो भने यसले तपाईंको घरको वास्तु दोषहरू हटाउँदछ।
एक व्यक्ति जसको परिवारमा सँधै समस्याको वातावरण हुन्छ र परिवारका सबै सदस्यहरू कुनै न कुनै प्रकारको चिन्तामा हुन्छन्, त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि तपाईले पहेंलो सस्र्यु र दाउरा सँगै जलाउनुहोस् । र यसबाट निक्लेको धुवाँ घरको पुरै ठाउँमा फैलाउनुहोस् । तपाईंको सम्पूर्ण घर, यदि तपाईंले यो उपाय गर्नुभयो भने यसले परिवारका सदस्यहरूबीच प्रेम बढाउनेछ। (gnewsnepal.com बाट सभार)
कैलाली जिल्लामा अब निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लागू
ओलीले पार्टी एकता भंग गर्न खोजेको माधव नेपालको आरोप